1. Kukholelwa ukuba abantu abaninzi banokuba neakhawunti yakudala ye-Instagram abangasayisebenzisiyo. Kodwa ayivali kwaye ishiye iakhawunti yakho yodwa, ke ulwazi kunye neefoto zakho ziya kuhlala zikwi-Intanethi. Ke ngoko, ukwenzela ukuthintela abanye ekufikeleleni kulwazi nakwimifanekiso. Ukususa iakhawunti ye-Instagram, kunokwenziwa ngeendlela ezi-2: cima iakhawunti ye-Instagram okwethutyana kwaye uyicime ngokusisigxina. Ukuba ufuna ukwazi into ekufuneka uyenzile, masijonge.
2. Ungayicima njani iakhawunti ye-Instagram okwethutyana
3. Ukucinywa okwethutyana kweakhawunti ye-Instagram, kuyakwenza umnini-akhawunti, abalandeli kunye noluntu ngokubanzi. Ayikwazi ukubona iiakhawunti okanye ukwenza imisebenzi kwiakhawunti evaliweyo. Nangona kunjalo, uncedo lolu hlobo lokuvalwa kweakhawunti kukuba unokuphinda uqalise ukusebenza kamva. Amanyathelo okwenza ukuba iakhawunti yakho ye-Instagram ingasebenzi okwethutyana imi ngolu hlobo lulandelayo: Okokuqala, yiya ku Ngokucima iakhawunti yakho ye-Instagram, kuya kufuneka ungene ngewebhu kuphela. Awunakho ukuvala nge-Instagram app
4. Xa ungene kwinkqubo Cinezela ukufaka iphepha lakho lenkangeleko.
5. Emva koko ucofe iqhosha lokuhlela iprofayile.
6. Emva kwexesha xa ungena kwiphepha lokuhlela iprofayili Ungacofa iqhosha. "Yenza i-akhawunti yam isebenze okwethutyana"
7. Uya kuthi ke uyalelwe ukuba ukhethe isizathu sokuvala iakhawunti yakho okwethutyana kwaye ufake ipassword yeakhawunti yakho ye-Instagram Nje ukuba ugqibe yonke into, cinezela iqhosha. "Ukwenza iakhawunti yomsebenzisi okwethutyana" yenziwe.
8. Ungayicima njani iakhawunti ye-Instagram ngokusisigxina
9. Ukucinywa ngokusisigxina kweakhawunti yakho ye-Instagram kukususa ngokusisigxina iakhawunti yakho nayo yonke idatha yakho. Kwaye ayinakufunyanwa kwakhona Amanyathelo okususa ngokusisigxina iakhawunti ye-Instagram imi ngolu hlobo lulandelayo - Inyathelo lokuqala uya >> https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ ngokungena kwiakhawunti ye-Instagram ngokusebenzisa isikhangeli sewebhu kuphela - Emva koko ucinezela iqhosha. "Cima .. (igama leakhawunti yakho) .." yenziwe. Nangona kunjalo, xa ucinezela iqhosha lokucima iakhawunti, iakhawunti yakho ayisayi kucinywa kwangoko. Kodwa iya kufihlwa Kwaye iyakucinywa ngomhla kunye nexesha elichaziweyo Ukuba ayihlaziywanga, iakhawunti yakho iya kucinywa. Ungabuya kwaye urhoxise ukucinywa kweakhawunti. Kodwa ukuba umhla kunye nexesha elidlulileyo lidlulile, iakhawunti yakho iya kucinywa umphelo kwaye ayinakufunyanwa.